आखिर बन्दसत्र परिसरमा भीम रावलको पर्चा किन खोसियो ? यस्तो छ कारण - ramechhapkhabar.com
आखिर बन्दसत्र परिसरमा भीम रावलको पर्चा किन खोसियो ? यस्तो छ कारण
१२ मंसिर चितवन ।
नेकपा एमालेको चितवनमा जारी १०औं महाधिवेशनको बन्दसत्र परिसरबाट अध्यक्षका दाबेदार भीम रावलको पर्चा खोसिएको छ । आचारसंहिताविपरीत भएको भन्दै रावलको पर्चा खोसिएको जनाइएको छ ।
रावल पक्षधरले ‘मेरो उम्मेदवारी किन ?’ लेखिएको पर्चा बन्दसत्र हलको गेटमै पुगेर बाँडिरहेका थिए । हातमा बोकेर बन्दसत्र हुने हल भित्र छिर्न लागेका कार्यकर्ताको साथबाट स्वयंसेवकले पर्चा खोसेका हुन् ।
एमालेले महाधिवेशनमा चार बाइ चार इन्चभन्दा बढीका प्रसारसामग्री प्रयोग गर्न नपाइने आचारसंहिता बनाएको छ । बन्दसत्रको दोस्रो दिन आज सर्वसम्मत नेतृत्व चयन गर्नेबारे छलफल भइरहेको छ । हिजो बन्दसत्र हलले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई पदाधिकारी र सदस्य तोक्ने सर्वाधिकार दिएको थियो ।
उक्त निर्णयप्रति रावलले आपत्ति जनाइरहेका छन् । रावलले अहिलेसम्म आफ्नो उम्मेदवारी कायम रहेको बताएका छन् ।
कांग्रेस काभ्रेमा देउवा–सिटौला प्यालन विजयी : सभापति बने तीर्थ लामा
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस काभ्रेको जिल्ला कार्यसमिति सभापतिमा देउवा–सिटौला प्यानलका तीर्थ लामा विजयी भएका छन् । पौडेल–कोइराला प्यानलका अच्युत पौडेललाई भारी मतान्तरले पराजित गर्दै लामा सभापति निर्वाचित भएका हुन् । लामाले १६ सय ४६ मत प्राप्त गर्दा पौडेलले ७७० मत पाएका छन् ।
उपसभापतिसहित पूरै टिम देउवा–सिटौला प्यानल निर्वाचित भएको छ । जिल्ला सभापति बनेका लामा सभापति शेरबहादुर देउवानिकट हुन् । उपसभापतिमा नेता कृष्णप्रसाद सिटौलानिकट रमेश हुमागाईं र ठाकुरप्रसाद न्यौपाने निर्वाचित भएका छन् ।
सचिवमा सिटौलानिकट माधव ढकाल र देउवानिकट गुणराज मुक्तान निर्वाचित भएका छन् । सहसचिवमा रवीन्द्रनाथ सिक्देल र समीर व्यञ्जु श्रेष्ठ निर्वाचित भएको जनाइएको छ ।